Kungwarira Air Compressor Air Oil Separator - Airpull (Shanghai) firita Co., Ltd
1. Tora compressed Air Quality kupinda Account In kwomuzvarirwo ezvinhu, compressed mhepo kwakaita kubva mumhepo compressor ine imwe mari nemvura uye lubricating mafuta, zvose izvo havabvumirwi mune dzimwe nguva. Pakadaro, kwete chete chaunofanira kusarudza zvakakodzera mhepo compressor, asi unofanira kuwedzera zvimwe pambiru kurapwa michina.
2. Sarudza vasiri lubricated compressor zvinogona kubudisa compressed mhepo chete hake mafuta. Kana akawedzerwa pamwe chikuru kana yechipiri purifier kana Dryer, mhepo compressor anogona kuita compressed mhepo isina mafuta kana mvura kugutsikana.
3. Mwero kuomesa uye kuwanda kunoenderana yeGmail.END_STRONG chinodiwa. Kazhinji kutaura, configuration kuti ndiyo: mhepo compressor + mhepo okuchengetera tangi + FC Centrifugal mafuta-mvura separator + refrigerated mhepo Dryer + FT Sefa + Fa micro mafuta mhute Sefa + (Absorção de Água drier kuvat + FT + FH kusashanda kabhoni firita.)
4. Mhepo okuchengetera tangi ndowenyika kufurirwa mudziyo. Zvinofanira vakagadzirira nekuchengetedzwa vharafu, kumanikidza gage, uye dzimwe kuchengeteka nenhumbi. Kana mhepo zvinoerera huwandu kubva 2m³ / Maminitsi kuti 4m³ / Maminitsi, shandisa 1,000L mhepo okuchengetera tangi. Nokuti mari kubvira 6m³ / Maminitsi to10m³ / Maminitsi, kusarudza tangi pamwe bhuku 1,500L kuna 2,000L.